Isu tinogara takaisa pfungwa pazvikanganiso kana zvasvika kune vatengi vedu 'dhijitari rekushambadzira zano. Majini ekutsvaga haasi chete chiteshi chevemabhizimusi nevatengi kuti vawane iwo maratidziro avanotsvaga, maalgorithms zvakare chiratidzo chakakurumbira chemvumo yechiratidzo pamhepo. Sezvo isu tichiongorora izvo zvirimo zvinotyaira kutarisa kune iyo brand, isu tinofananidza zvirimo pane yega yega nzvimbo yemukwikwidzi kuti tione kuti misiyano chii.
Isa parutivi bhajeti rakakosha re anotsanangura video zviri kusvika pamaminetsi maviri kureba. Rangarira kuti vhidhiyo iyi iri kunamatira newe kwechinguva, saka kuve nechokwadi kwekumaka kwakaringana, kubvisa chero nguva-yakatarwa kutaurwa, uye kuseka ramangwana rinenge riri zano rakakura. Vhidhiyo yehupenyu inoita mushe ingave $ 2k kusvika $ 5k - asi kudzoka kukuru pane kudyara.
Tora mukana wese waunokwanisa kutora firimu zvipupuriro mavhidhiyo. Kunyangwe kana zvichireva kuti iwe unohaya vashandi vemafirimu uye wozvitumira kune ako vatengi, iwe unofanirwa kunyatsoisa mari mairi. Uchapupu zviratidzo zvekutenda izvo zvisingakwanise kurohwa. Ivo vanogona zvakare kudzoreredzwa kune zvakanyorwa zvemukati mune ese ako edhijitari uye anodhinda masvikiro. Usarerutse simba rekupupura kwemanzwiro pane yako kambani.
Usakanganwa kuti mavhidhiyo haasi ega anonakidza epamhepo saiti yako, Youtube pachayo inoenderera ichitungamira kutsvaga kwepamhepo padhuze neGoogle Gadzirira yako Youtube chiteshi uye yega yega mavhidhiyo ako ekukanganisa kwakanyanya. Gadzira mamwe mavhidhiyo nguva nenguva kuti uvake vanyore uye utange nharaunda yako wega.